Umkhiqizi nomhlinzeki we-China Automatic Door Spray Washer UShinva
I-Rapid-A-520 Automatic Washer-disinfector iyimishini yokuwasha esebenza kahle kakhulu eyacwaninga futhi yathuthukiswa ngokuya ngesimo sangempela esibhedlela. Isetshenziselwa kabanzi ukugeza nokubulala amagciwane okokusebenza okuhlinzekwayo, izinto ezithengiswayo, amathileyi wezokwelapha kanye namacwecwe, izinsimbi zokubulala izinzwa nepayipi likathayela esibhedlela se-CSSD noma egumbini lokusebenza. Inzuzo enkulu yemishini ukusindisa abasebenzi ngejubane lokuwasha ngokushesha okunganciphisa isikhathi sokusebenza se-1/3 kunanini ngaphambili.
■ Idizayini enhle nenqubo yegumbi
Igumbi eliyindilinga ku-SUS316L linwebeka ngesikhathi esisodwa ngaphandle kwekona elifile nokuhlangana kwe-welding, okungcono ukukhipha ngokushelela nokonga amanzi.
■ Isistimu yokulawula okhaliphile
Izinhlangothi Double othomathikhi mpo beya iminyango, elawulwa touch screen, okuyinto elula futhi ukuphepha. Inqubo yomjikelezo ihlakaniphile ilawulwa yi-PLC, asikho isidingo sokulawulwa kwabasebenzi. Konke ukushisa, ingcindezi, isikhathi, izinqubo zokucubungula, i-alamu ingakhonjiswa esikrinini sokuthinta futhi iphinde iqoshwe ngamaphrinta akhelwe ngaphakathi.
■ Izinhlobonhlobo zezinhlelo
Izinhlelo eziyi-11 ezisethwe ngaphambilini nezinhlelo ezingama-21 ezichazwe ngumsebenzisi ezingachazwa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi
■ Kulayishwa kalula futhi kuthuliswa
Amasistimu ezenziwa ngesandla noma nge-othomathikhi wokulayisha nawothula ayatholakala. Ukuwasha i-rack, ukudlulisa inqola kanye nokudlulisa uhlelo, kuhambisane nokuklanywa kwe-ergonomics, kulula ukusebenza nokubekwa.
■ Ukonga amandla
Igumbi lokuwasha ngesakhiwo esihle sokonga amanzi; Amathangi wamanzi asengaphambili okushisa kanye nohlelo olukhethekile olwenzelwe ukukhuphuka nokushisa nokuhlelwa kwamapayipi kukwenza kube nokonga ukusetshenziswa kwamanzi namandla ka-30% kunakuqala.
■ Ukusebenza okusheshayo nokusheshayo
I-Rapid-A-520 ingenye ye-washer-disinfector esheshayo emhlabeni, okuyisikhathi esivamile somjikelezo esincishiswe saba ngama-28mins kufaka phakathi ukuwasha ngaphambi kwesikhathi, ukuwasha, ukukhuphuka kokuqala, ukukhuphuka kwesibili, ukuvimbela amagciwane nokumisa. Okwamanje ingacubungula amathreyi we-15 DIN ngomjikelezo ngamunye.
Isistimu yangaphambi kokushisa kwamanzi inciphise isikhathi sokulungiselela, asikho isikhathi sokulinda ngenkathi kusebenza umjikelezo.
Langaphambilini Okuzenzakalelayo kwe-Flexible Endoscope Washer Disinfector
Olandelayo: I-High Energy Medical Electron Linear Accelerator
Ikhasethi le-Hydrogen peroxide
Iteyipu Yesikhombi Senzalo Esingasetshenziswanga Esikhokhelwa
I-Agent Yokuhlanza I-Multienzyme Engathathi hlangothi Yezokwelapha ...
Okuzenzakalelayo Tray Carrier Ultrasonic Washers
Isitebhisi seladi (Izendlalelo ezimbili)
Ifasitela lokudlulisa elingena kabili emnyango (Iyunithi eyodwa)